Haala Dhukkuba HIV/AIDSii Oromiyaa fi Hawaasa Oromoo Biyya Alaa Keessa Jiruu
by Dr. Ibrahim Elemo / go back to Third Issue
Akkaata Gabaasii UNAIDS [http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.asp] (dhaabbata qindeessituu Sagntaa AIDSii Gamtaa Mootummoota Adunyaa) bara 2008 bahe ibsuuti balaan dhibee HIVn dhala namaa irratti dhaqabaa jiru gad-bu’aa jira. Kun jechuun Adunyaa irratti tamsa’innii dhibee HIV,AIDSii bakka jiru irratti ittifamaa jira jechuudha. Biyyoota tokko tokko keessatti weerarrii dhukkuba HIV/AIDSii sadarkaa kanaan dura jiru irraa gad-bu’aa jira. Haa ta’uu garuu baayyinnii namoota dhibee HIV,AIDSii waliin jiraatanii waggaa waggaan dabalaa deemuuti jira; kunis sababii isaa namootii hedduun dhukkuba kanaan ammallee qabamaa jiraachuu fi qorsii waan jiruuf namootii dhibee kana waliin jiraatan(umrii dheerinna) baayyachaa waan deemaa jiruuf jedhamee yaadama.
Bara dheeraaf namoota dhibee kanaan qabamaniif abdiin tokkolleen jiraachuu yoo baateyyuu waggoota muraasaa as garuu Dawaan mana yaalaa keessatti kennamaa jira. Dawaan kun namoota dhibeedhan qabamanii gara sardarkaa AIDSii dhaqabanii kan kennamuuf (ART) kan dubbartoota ulfaa’an dhibee kanan qabamaniif haadha irraa gara ilmeeti akka hin dabare kennamuudha (PMTCT).Oromiyaa keessatti dhukkusattooti magaalota faggoo fi baaddiyaa fagoo keessa jiraatan tajaajila yaala kana argadhuun hin dandda’an ture. Jalqaba irratti Dawaan tolaan waan hin kennamneef, mana yaala hedduu keessatti tajaajilii dawaa farra AIDSii waan hin jirreef namootii dawaa fudhataniif dubbartootii tajaajila PMTCT argatan akka sadarkaa Itoophiyaati baayyee gad-aanaa ture. Haa ta’uu garuu waggaa 2005 irraa jalqabee Dawaan bilisaan kennamuu waan eegalameef namotii dawaa fudhatan bara baraan dabalaa dhufaa jira. Bara 2008 hanga ji’a Sadaasaa namoota dhibee HIVn faalamanii sadarkaa AIDSii gahan dawaa argachuu qaban 69,423 keessaa namootii dawaa fudhachuu jalqaban 33,077 ta’u kana keessaa namootii fudhachaa jiran (osoo addaan hin kunnee) 25,043 dha. Kun jechuun namoota dawaa fudhachuu qaban keessaa walakkaa ol hanga ammaa osoo qoricha hin argatin jiran jechuudha. Bara 2008 keessatti namoota dhibee kana waliin jiraatan keessa kan du’aan adunyaa kana irraa godaanan/boqotan 14,649.